Restaurant "Monet" (Yekaterinburg): incazelo, imenyu kanye nokubuyekezwa
Ukudla nokuphuza, Ukubuyekeza mayelana nokudla
Uma sicabangela izindawo zokudlela zase-Ekaterinburg, ngithanda ukuvula isikhungo esibizwa ngokuthi "Monet". Mayelana nokuthi izivakashi zilindele lapha, futhi sizoxoxa ngalesi sihloko. Futhi sizothola ukuthi yini amakhasimende anayo ngemva kokuvakashela lesi sikhungo.
Restaurant Monet (Ekaterinburg): incazelo, isithombe
Lokhu kusungulwa indawo enhle kakhulu yokuphumula nomndeni wonke. Ngakho-ke, uma uzovakashela le ndawo yokudlela, khona-ke akusadingeki ukusesha, obani okufanele ushiye izingane ngesikhathi sokungabikho kwakho. Zizwe ukhululekile ukuthatha nabo, ngoba bazoba nento okumele bayenze lapha, futhi. Futhi wonke umndeni lapha ungafika nganoma yisiphi isikhathi.
Ngakho-ke, kusukela ngehora lesishiyagalombili ekuseni kuze kube semini uzonikezwa isidlo sasekuseni esihlwabusayo nesinomsoco ngenkezo yekhofi elimnandi. Kuze kube ngehora lesine ntambama ungangena lapha ukuze udle, usunambithe omunye wezingubo eziningi kokubili ukudla kwaseRashiya nase-Italy. Ebusuku, indawo yokudlela "i-Monet" (Ekaterinburg) ivula iminyango yayo phambi komuntu wonke ofuna ukudla okunambitha endaweni enhle. Futhi lapha kuzoba okulula kakhulu kokubili emindenini emikhulu enezingane, nasezinkampanini zentsha, nakubantu bebhizinisi.
Abaphathi nabasebenzi bezokudlela ezibuzwayo bayakwazi konke okubaluleke kakhulu ukuvakasha komndeni, futhi benza konke okwenza kube mnandi futhi kunethezekile ngangokunokwenzeka.
Restaurant "Monet" (Ekaterinburg) iyisikhungo sobukhulu obuphakathi. Ngakho-ke, inani lezihlalo lapha liyi-60. Insizakalo yangaphambi kokubhuka inikezwa. Ungakwenza ngokubiza +7 (343) 287 -10-81. Ikheli le-restaurant: Ekaterinburg, ul. URosa Luxemburg, 49, e-1st floor.
Ngokuqondene nomklamo, i-design yangaphakathi "i-Monet" idalwe ngesitayela sokudlela komndeni wedolobha. Kubucayi kakhulu lapha. Kunendawo engabhemi. Ingqikithi kunamahholo amabili endaweni yokudlela, enye yazo ingokwezihambeli ezincane kakhulu. Ama-VIP-amahholo awahlinzekiwe lapha, kodwa kungenzeka ukuhlela isevisi ye-VIP. Ehholo kukhona i-TV, futhi ingemuva idlalwe ngumculo omnandi ongathandeki.
Ngezikhathi ezithile ngesisekelo sesitolo sokudlela, abapheki abanolwazi baqhuba izifundo zokupheka kubantu abadala, lapho wonke umuntu angathuthukisa khona amakhono awo, emva kwalokho abamangaza amakhaya nabangane ngezitsha ezinhle kakhulu zokupheka kwabo. Futhi endaweni yokudlela yabantu abadala kunesikole se-barmen kanye ne "robot sushi".
Njengoba indawo yokudlela "i-Monet" (Yekaterinburg) yenzelwe wonke amalungu omndeni kusuka ezincane kuya ezinkulu, konke kwenziwa lapha ukuze ukwanelise izidingo zabazali kuphela kodwa nabantwana babo. Yingakho kukhona indawo yokudlala ehlukile yabantwana lapha. Imincintiswano emihle ibanjwa, ukuzijabulisa kuhlelwe. Izingane nazo zifundiswa izinto eziwusizo: isibonelo, banethuba lokuya ekilasini eliyinhloko, lapho wonke umfundi osemncane okhulayo azokwazi ukubhaka pizza ngokwakhe. Njengomthetho, izingane ziphuma kule ndawo yokudlela zijabulisa ngokugcwele.
Kusukela "i-Monet" yindawo yokudlela yomndeni, kunezinhlobonhlobo eziningi zokudla kwabantu abadala nezitsha zezingane.
Ethandwa kakhulu yizivakashi zokusungulwa kuyinto yokudlela yase-Italy. It ikakhulukazi emelelwa pizza, pasta, risotto, amasaladi kanye ezihlukahlukene ukudla okulula. Ngokuqondene ne-pizza, ethandwa kakhulu yizingane zombili kanye nabantu abadala, izinhlobo ezidumile kakhulu zilandelayo: "I-Mexican" (ukugcwalisa utamatisi obukhali kanye nenyama entsha yezintambo ezinamakhompiyutha), "umlimi" (isitsha esingabizi esigcwele amasobho kanye nebhethoni, Ukuhlanganiswa ngokuphelele nemifino) kanye "nezinkathi zonyaka" (i-pizza, enezingxenye ezine, ukuze ilungu ngalinye lomndeni lithole kuso ucezu oluthandayo). Futhi kwimenyu kukhona uchungechunge lonke lwezidlo ezinkulu zase-Italy, phakathi kwazo yilowo nalowo ozokhetha okuthile ngokwabo.
Ukunaka okukhethekile kwimenyu yokudlela "i-Monet" kunikezwa ikhadi le-dessert. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ngezinyosi ezincane kunazo zonke. Izivakashi zokusungulwa zizokwazisa amakhadi yemenyu yetiyi nekhofi. Emva kwakho konke, kuyinto enhle kakhulu ukudla ucezu lwe-cheesecake, i-tiramisu noma i-pancake ngendebe yekhofi elimnandi noma itiye.
Kukhona nokukhethwa okubanzi kweziphuzo ezidakayo. Ungazijwayeza ngokutadisha ikhadi le-bar. Bonke abafika lapha bazokwenzela izinhlobo ezihlukahlukene zokuphuza utshwala obudakayo futhi obungelona utshwala. Kukhona i-hookah esitolo sokudlela.
"Monet" (yokudla): izivakashi izibuyekezo
Ngokusho kwezivakashi zalesi sakhiwo, indawo yokudlela idinga okungenani ukubuka okukodwa lapha. Futhi lokhu kunconywa ngumndeni wonke. Ngakho-ke, ngokusho kwezivakashi, babenelisekile yizinto zonke eMonet: kokubili indawo, nabasebenzi abanobungane, ne-cuisine enhle kakhulu, kanye nezangaphakathi ezimnandi. Yiqiniso, amanye amakhasimende avamile athi amanani asanda kuphakama. Noma kunjalo, azikho ezinye izikhalo. Ngendlela, izakhamizi eziningi zaseYekaterinburg ziyakugubha ngokugubha usuku lokuzalwa lwamalungu amancane omndeni endaweni yokudlela "i-Monet". Ngokusho kwabo, emva kweholidi wonke umuntu uyajabula - kokubili izingane nabazali bazo.
Restaurant "Kompot" - yokudlela noma namanje "compote"?
Izindawo zokudlela e-Budapest: uhlu, imenyu, izibuyekezo
"Nostalgia", yokudlela: incazelo, imenyu, ukubuyekezwa
Restaurant "Claude Monet" eMoscow: ikheli, iwebhusayithi esemthethweni, imenyu
I-Churchill yokudlela e-Samara: amasiko we-Old World
Indawo yaseSiksti: inhloko-dolobha kusukela ekubukeni kwenyoni
Okuhle Kuhle: hookah yaseSiriya
Ceiling emaceleni ngoba Uphahla lwangaphakathi: izinhlobo
Kanjani ukuba aphule kude ukudla futhi ukunciphisa umzimba
Njengoba yokuziphindiselela ngomsindo omakhelwane phezulu futhi ngesikhathi esifanayo buthule wena?
Qaphela malware Ungasavele ukuhlasela isistimu yakho yokusebenza! Indlela hlola ikhompyutha yakho amagciwane
Shampoo «naseVichy» (naseVichy): Amazinga, ukubuyekezwa
Ezhi Dudek - unozinti enkulu Polish
Ifenisha ngezinyawo - Izinhlobo kanye Izici
Kanjani ukwenza ekucwaningweni kolimi kombhalo
Ama-chocolate ngezandla zabo. Indlela yokwenza i-chocolate candies ekhaya